DUSIN: Laacibka ku guulaystey Abaalmarinta Ballon d’Or 2021 oo lasoo bandhigay!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DUSIN: Laacibka ku guulaystey Abaalmarinta Ballon d’Or 2021 oo lasoo bandhigay!!
DUSIN: Laacibka ku guulaystey Abaalmarinta Ballon d’Or 2021 oo lasoo bandhigay!!
(Paris) 09 Nof 2021 – Waxaa soo baxaya warar dusin ah oo ku saabsan cidda runtii hanatay Kubadda Dahabiga ah ee Ballon d’Or dufcadda 2021-ka.
Majaladda France Football ayaa la sheegaya inay billadan bixinayso Isniin, 29-ka Nofeembar, iyadoo ay isku dhamaatay codayntii la samaynayey, isla markaana durba la diyaariyey qofka guulaystey iyo sida loo kala sarreeyo.
Waxaana soo baxaysa in laacibka guulaystey uu yaay Leo Messi oo haddii ay dhabowdo qaadanaya markiisii 7-aad.
Arrintan ayay dad badani durba gunuunuc ka bilaabeen iyadoo la hadal hayey laacibiin kale sida Jorginho, Lewandowsk iwm.
Previous article”Waa nalaku soo duuley!” – Jarmanka oo ku baaqay in laga gaaro dalka Poland & Ruushka oo lagu eedeeyey in…
Next articleSomalia & qorshaha ay la tagtay shirka Shidaalka Afrika?!